DEG DEG + XOG CUSUB: Puntland oo ballan qaadan inay la wareegeyso dhismayaal ku yaalla Taleex, ganacsatada u dhashay Somaliland oo… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG + XOG CUSUB: Puntland oo ballan qaadan inay la wareegeyso...
DEG DEG + XOG CUSUB: Puntland oo ballan qaadan inay la wareegeyso dhismayaal ku yaalla Taleex, ganacsatada u dhashay Somaliland oo…
Garoowe (Halqaran.com) – Maamulka Puntland ayaa balan qaaday inay la wareegi doonto dhismayaal ku yaal degmada Taleex ee gobolka Sool si ay ugu qabato adeegyada bulshada degmadaasi iyo deegaamada hoos yimaada.
Duqa degmada Taleex Iimaan Cali Shire ayaa warbaahinta u sheegay in ay dhiseen ganacsato reer Taleex ah, kadib markii maamulka Hargaysa uu u balan-qaaday inuu lacagta kaga baxda siin doono haseyeeshee uu uga baxay.
UPDATE: Mashruuc ay saxiixday Dowladda Soomaaliya oo durba ka billowday deegaannada Somaliland, waa magaaladee?
Geesta kale, shacabka reer Taleex ayaa si weyn u soo dhoweysey dhismaha waddo laami ah oo isku xiraysa Taleex iyo laamiga gobolada Waqooyi uga baxa Garoowe taasi oo uu horay u dhagax dhigay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Gaas, haseyeeshee uu dhismeheeda balan-qaaday Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.
DEG DEG: DF Somalia oo diiday dalabka Kenya ee dib u dhigista dacwada badda (Jawaab lama filaan oo la siiyay Kenya)!
XOG XASAASI: Agaasime Madaxtooyo oo Al-Shabaab isku dhiibay!, (Maxaa ku kalifay arrintaan) + Magaciisa.
DAAWO SAWIRO: Waa Ciidan ceenkee ah kuwa sugaya Amniga Shirka Beelaha Galmudug & RW Kheyre oo la kulmay ciidankaasi.
Maxay tahay Sababta rasmiga ah ee KENYA ay maxkamadda ICJ uga dalbatay in la hakiyo dacwadda badda? (Ogow Xaqiiqda?)!
dhaqaalahooda u soo celineyso
Mayonge September 4, 2019 At 04:05
Waxaa haboon in si fiican loo fahmo ninkii xadgudub geystay waa waqtigii lagu qaadilahaa . waxaa wanaagsan hogaamiye dagaaleed marnaba lama cafimaayo ka soo qaaad dagaaladii ka dhacay Gaalkacyo kuwii ka dhacay Tukuraq kuwii ka dhacay Sool iyo Sanaag, Axmed Madoobe waa iska cadahay dambiyada loo haysto asga kursi buu ka hadlaayo raga kalena waxay qoesheynayaan sidii lagu qabanlahaa. Waxaan aaminsanahay Dani dib ha ugu noqdo Puntland ad dagaalada uu wado halu bedelo siday dadka u helilahaayeen Biyo nadiif ahiyo shaqo